2021-10-13 ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံသို့ အလုံးရေ 500 ကွန်ဖရင့်စနစ်မော်နီတာလွှင့်တင်မှု - သတင်း - Wenzhou Zhechi Electric Co., Ltd.
Wenzhou Zhechi လျှပ်စစ် Co., Ltd
85 LCD Monitor Screen Motorized Lift 17.3 လက်မကို တင်ဆောင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းများကို ကွမ်ကျိုးမှ ဆော်ဒီအာရေဗျသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤဖောက်သည်သည် အစည်းအဝေးခန်း၏ အလုံးစုံအစီအစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အကြိမ်ကြိမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်၏ နောက်ထပ်တိုးတက်မှုကို မျှော်လင့်ပါသည်။
17.3 မော်နီတာသည် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်အတွက် ကြိုတင်လျှို့ဝှက်ပစ္စည်းများအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
10.1ï¼Œ13.3ï¼Œ15.6၊ 17.3၊ 18.4၊ 21.5၊ 23.8 လက်မ Full HD စခရင်/ touch screen သည် မတူညီသော မော်နီတာ အရွယ်အစား၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ရွေးချယ်မှုအတွက်
80 မီလီမီတာ အလွန်ပါးလွှာသော အကျယ်အဝန်း ဒီဇိုင်းကို မြှင့်တင်ပါ၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးသည် ပို့ဆောင်ခကို သက်သာစေရန် ပေါ့ပါးသော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားသည်။
တိုင်ကီကွင်းဆက်နှင့် စက်ဂီယာများဖြင့် အတက်အဆင်း ခုန်နေသော စူပါ-အတော်လေး synchrous မော်တာ နှစ်ထပ်ဖြင့်၊ ဓာတ်လှေကားသည် အလုပ်လုပ်သောအခါ အလွန်ချောမွေ့ပြီး တိတ်ဆိတ်ပါသည်။
ကွန်ဖရင့်စနစ်၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စနစ်၊ တီဗီကွန်ဖရင့်စနစ်၊ ငွေကြေးပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုစနစ်၊ အဆင့်မြင့်ရုံးစနစ်၊ ကွန်ဖရင့်စားပွဲနှင့် ကွန်ပျူတာစားပွဲစသည်ဖြင့် ကွန်ဖရင့်စားပွဲနှင့် ကွန်ပြူတာစားပွဲစသည်တို့တွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုသည်။
1. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပစ္စည်း အပြည့်အစုံ၊ အလင်း၊ တိုက်စားမှုဒဏ်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်နှင့် ခြစ်ရာရရန် မလွယ်ကူပါ။
2. အလွန်ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး၏ 80mm အကျယ်သာ။
3. တိုင်ကီကွင်းဆက်နှင့် စက်ဂီယာများဖြင့် မော်တာဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်လုပ်သောအခါတွင် ချောမွေ့ပြီး တိတ်ဆိတ်သည်။
4. နေရာပိုချွေတာပြီး ခေတ်မီရုံးခန်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေရန် ဝှက်ထားသောဒီဇိုင်း။
5. အလွန်ပါးလွှာသော မော်နီတာနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကြော့ရှင်းသော ဒီဇိုင်းနှင့် နေရာချွေတာခြင်း။
6. အသုံးပြုသူများအတွက် prefect viewing angle ဖြစ်အောင် 0-30 degree ချိန်ညှိနိုင်သောထောင့်။
4. အလွန်ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်ဘဝဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်း လုံးဝတိတ်ဆိတ်ခြင်း။
5. ချောမွေ့စွာနှင့် ငြိမ်သက်စွာ၊ မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ။
6. လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် LCD မော်နီတာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
8. ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- LCD motorizedLift panel တွင် Touch Switch၊ RF အဝေးထိန်းခလုတ်၊ RS232 နှင့် rs 485 ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု။
9. အသုံးပြုသူ၏ လိုအပ်ချက်အရ ပါဝါပလပ်နှင့် ဗို့အားကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
10. လက်ကိုဆန့် ကျင်သောလက်ကာကွယ်မှုစနစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စမတ်အိမ်၊ စမတ်လျှပ်စစ်၊ ပါဝါစနစ် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်ကုန်အသစ်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic၊ အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မော်ဂျူလာအသိဉာဏ်ရှိသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ။